Yasekwa ngonyaka ka -1992, ahlanganise indawo 25000 square metres kunye ne workshop kwindawo 18000 square metres, Kuye kwezithuthi lula kunye nendawo ophezulu kunye drive kuphela imizuzu-30 ukuya Lishe Airport International Ningbo kunye drive kuphela ngomzuzu-25 ukuya Ningbo Port --- edume izibuko ulwandle ngamazwe kunye ukugqithisela non-etyekezwa, anzulu-manzi kunye ice-free unyaka wonke.
NJMM uye Equipments phambili, iteknoloji ngokupheleleyo-epheleleyo incoko kwakunye etyebileyo ukwenziwa kunye nolawulo namava cinezela-welding intsimbi indawo uthango ngaphezu kweminyaka eli-10. NJMM phakathi abenzi ambalwa ahamba phambili abo inkqubo yonke imveliso ndingazali bar ukuya ngentsimbi kwalenza nothango lwaso.
Le ekhawulezayo yobhekiso bezenzululwazi nobugcisa, yemarike iimveliso kunye neenkonzo ziye elikhulayo, ukwenzela ukuqinisekisa umgangatho wenkonzo pre-ukuthengisa, inkampani iye inkqubo yokhetho engqongqo abasebenzi abatsha, kwaye ubonelela iintlobo zoqeqesho emsebenzini kunye amathuba ukuze ukufunda aphesheya kunye nabasebenzi zobugcisa. Inkampani "nocikizeko nempumelelo, umthengi kuqala" nkonzo ijolise ekunikeni iingcebiso zobungcali kunye nenkxaso yobugcisa kubathengi.
Umgangatho ke ubomi, ingqondo umgangatho umphefumlo wobomi. Ngoko ke, le nkampani iye ekuphuculeni umgangatho imveliso, kwaye kufunyanwe ulwazi brand umgangatho ngokupheleleyo kwindawo yokuqala. Inkampani nge izixhobo zovavanyo umgangatho wocikizeko kunye nabasebenzi nokuvavanya, injongo kukuba ukuqinisekisa umgangatho kwaye ukwandisa ukhuphiswano kwamashishini.